Nispakhya National Weekly ( निस्पक्ष राष्ट्रिय साप्ताहिक ) online News Paper: विचारविहीन हालतको काङ्ग्रेसले अझै पनि आफ्नो मार्गदर्शक नेताका रूपमा बीपीको नाम उच्चारण गर्छ भने त्यो पाखण्डबाहेक केही हुन सक्दैन
आधिपत्यले राजनीतिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाएको भए पनि त्यहाँ अवलम्बन गरिएको खुला अर्थनीतिले कम्युनिस्ट अधिनायकवादलाई समेत तत्कालका लागि सुरक्षित रहन सहयोग पुर्‍याएको छ । खुला अर्थनीतिको सिद्धान्तमा आधारित भएर चाइना अघि बढ्न नसकेको भए सम्भवत: उसले अहिले पनि उत्तरकोरिया र क्युवाकै नियति भोगिरहेको
हुनसक्थ्यो । चाइनासँग अनेकौँ मुद्दामा विवाद र झमेला भए पनि भियतनामले समेत चीनको अनुशरण गरेर आफूलाई जोगाएको छ । बदलिन नचाहने उत्तरकोरिया र क्युवाले भने अहिले पनि साठी र सत्तरीको दशकमा चाइनाले भोगेको नियति व्यहोर्दै छ । साम्यवाद र सर्वहारा अधिनायकत्त्वको समाजवादमा विश्वास राख्ने साम्यवादी राजनीतिक प्रणाली मानवीय स्वतन्त्रता र आर्थिक विकासको प्रमुख दुश्मन भएको प्रमाणित तथ्यहरूले गरिसकेका छन् । तथापि नेपालमा रुढिवादी कम्युनिस्टहरूको असोचनीय प्रभाव विस्तार हुनु आफैंमा आश्चर्यजनक र उदेकपूर्ण छ ।
बीपी कोइरालाले नेपालमा यहाँको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, नागरिक स्वतन्त्रता र आर्थिक विकासमा कम्युनिस्टहरू बाधक बन्न सक्ने सम्भावना धेरै पहिले नै देखिसक्नुभएको हो । नेपालको प्रजातन्त्र राजाबाट हनन भएको थियो र राजाले जननेता बीपी कोइरालालाई करिब आठ वर्ष त काराबासमै राखेका थिए । जेलमुक्त भएपछि पनि उहाँले मातृभूमिमा राजनीतिक सक्रियता दर्शाउन पाउनुभएन । लामो समयसम्म बीपीले विदेशमा बसेर आफ्नो मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलन सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । यर्सथमा बीपी कोइराला राजाबाट जीवनभर सताइए भन्नुपर्छ । यसरी राजाबाट सर्वाधिक सताइएका बीपी राजतन्त्रको विरुद्ध र गणतन्त्रका पक्षमा नजाँदा धेरैलाई आश्चर्य नलागेको होइन । २०३७ सालमा सम्पन्न जनमत सङ्ग्रहमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्ध षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताइएपछि धेरैले बीपी कोइराला अबचाहिँ पक्कै राजा र राजतन्त्रात्मक प्रणालीका विरुद्ध निर्मम ढङ्गले उभिनुहुनेछ भन्ने विश्वास गरेका थिए । तर, धेरैको विश्वासविपरीत बीपीले टुँडिखेलको खुलामञ्चमै उभिएर भनिदिनुभयो, ‘राजाको र मेरो घाँटी जोडिएको छ ।’ बीपीको यस्तो अभिव्यक्तिले कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरूलाई आक्रोशित तुल्याएको थियो भने प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कैयन योद्धाहरूलाई पनि निराश बनाएको थियो । उहाँले भावावेशमा आएर या सोचविचार नगरीकन त्यसप्रकारको अभिव्यक्ति दिनुभएको होइनरहेछ भन्ने प्रमाणित वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले गरिदिएको छ । बीपीले स्थापना गर्नुभएको काङ्ग्रेस पार्टी माओवादी एजेण्डाहरूमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै गणतन्त्र घोषणा गर्न त हौसियो, तर अहिले आफ्नो पूर्वमूल्यमान्यता र आदर्शसहितको पूर्ण प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने औकात भने काङ्ग्रेसले गुमाएको महसुस गरिँदै छ । प्रजातन्त्रमाथि अतिदक्षिणपन्थी र अतिवामपन्थी दुवै धु्रवबाट खतरा रहेको देखिए पनि बीपीले ज्यादा खतरा वामधु्रवबाट रहेको महसुस उतिबेलै गरिसक्नुभएको रहेछ । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको काङ्ग्रेसलाई फुर्क्याउँदै अघि लगाएर गणतन्त्र घोषणा गराइसकेपछि अतिवामपन्थीहरू काङ्ग्रेसको नामोनिसान मेट्न न्वारानदेखिको जोडबल लगाउँदै छन् । राजाको निरङ्कुशताविरुद्ध सँगसँगै आन्दोलनमा होमिएको काङ्ग्रेसलाई माओवादीले आफ्ना दस्तावेजहरूमा प्रमुख दुश्मनका रूपमा चित्रण गरेको छ । राज्यसंयन्त्र र जनस्तरमा विद्यमान काङ्ग्रेसको प्रभावलाई उन्मूलन गर्नु माओवादीको एक मात्र अभीष्ट भएको छ । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्वीकार गर्ने वाचाबन्धनसहित जङ्गलबाट सहर भित्रिएका माओवादीहरू काङ्ग्रेसको आदर्श, विचार र सिद्धान्तमाथि खुलेआम चुनौती दिँदै लोकतन्त्रको विकल्प खोज्न उद्यत् रहेका छन् । संविधानसभा र गणतन्त्रका पक्षमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जतिवटा सही गरेका भए पनि काङ्ग्रेस आज यी ‘उपलब्धि’हरूमा स्वामित्व जनाउन असमर्थ छ । काङ्ग्रेस नेतृत्वले जतिपटक दोहोर्‍याएर भने पनि जनतासमेत गणतन्त्र र संविधानसभाको स्वामित्व काङ्ग्रेसमा भएको मान्न तयार छैनन् । बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र, समाजवादमुखी खुला अर्थनीति, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारलाई काङ्ग्रेसले आफ्नो आदर्श या राजनीतिक धरातल बनाएको भए पनि गणतन्त्रात्मक नेपालमा काङ्ग्रेसको आवाज मलिन र झिनो हुँदै गएको छ । यसरी काङ्ग्रेसको आदर्श र अडान लुलो भएपछि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन स्वाभाविक रूपले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । द्वेष, इर्ष्या र भावावेशमा काङ्ग्रेसले बीपीको विचार त परित्याग गर्‍यो, तर नयाँ परिस्थितिमा आफ्नो विचार स्थापित गर्न सकिरहेको छैन । यर्सथ काङ्ग्रेस पार्टी विचारविहीनझैं भएको छ ।
दुई छिमेकी मुलुक भारत र चाइनाबाट सिक्न नसक्नु काङ्ग्रेसको महाभूल हो । दुवै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएका हुन्, तर एउटामा गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र संस्थागत र सुदृढ हुँदै गएको छ, अर्कोमा चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नामोनिसान पनि छैन, किन ? यस प्रश्नमा विचरण गरिएको भए काङ्ग्रेसलाई पूर्ण जवाफ प्राप्त हुन सक्थ्यो । चाइनामा डा. सुन यात सेनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्दा सायद उनले आफ्नो मुलुकबाट कुनै बेला लोकतन्त्र उन्मूलन हुने कल्पनासम्म गरेका थिएनन् । सन् १९११ मा स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्रमा रूपान्तरित भयो र आज ६ दशक पूरा भइसक्दा पनि चीनमा फेरि लोकतन्त्र फर्कने सङ्केतहरू देखिएका छैनन् । तर, अर्को छिमेकी मुलुक भारतमा भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत र सुदृढ हुँदै आर्थिक विकासको उच्चतम उपलब्धि हासिल गर्ने उत्साहजनक अग्रसरता देखिएको छ । यसबाट सोझै बुझिने सत्य के हो भने कम्युनिस्ट गतिविधि ज्यादा भएको मुलुकमा लोकतन्त्रसहितको गणतन्त्रको रक्षा र विकास हुन सक्दोरहेनछ । सायद बीपी कोइरालाले यस्तो वास्तविकताको उतिबेलै आत्मबोध गर्नुभएको थियो । त्यसैले उहाँले नेपालमा दक्षिणपन्थीभन्दा अतिवामपन्थीहरूबाट लोकतन्त्रमाथि खतरा रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सोहीबमोजिम व्यवहार गर्दै आउनुभएको थियो । गिरिजाप्रसादहरूले सम्भवत: बीपीको यो मर्म जस्ताको त्यस्तै बुझन सक्नुभएन, राजालाई तह लगाउन माओवादीलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै छु भन्ने गिरिजाप्रसादले ठान्नुभएको हुँदो हो, कार्यपरिणामले उहाँलाई नै माओवादीले नराम्रोसँग उपयोग गरेको प्रमाणित भइसकेको छ ।
बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित विचारलाई माओवादी सहयोगमा गिरिजाप्रसादले मूलच्छेदन त गर्नुभयो, तर नयाँ विचार स्थापित गर्न उहाँले भ्याउनुभएन । त्यसो त सत्य बोल्नुपर्दा गिरिजाप्रसादद्वारा विचार स्थापनाको आशा राख्नुपर्ने पनि होइन । यसरी पुरानो विचार विस्थापित गरेको र नयाँ विचार स्थापना गर्न नसकेको अवस्थाबाट आज काङ्ग्रेस गुज्रिरहेको छ । अर्थात् काङ्ग्रेस एकप्रकारले विचारविहीन मानव झुण्डझैं भएको छ । विकसित देशका राजनीति आदर्श र विचारभन्दा पनि अर्थतन्त्र र कार्यव्यवहार केन्द्रित भइसकेका भए पनि अल्पविकसित र गरिब मुलुकका राजनीति कोरा आदर्श र विचारको कोपभाजनबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । विचारविहीन हुनै लागिसकेको काङ्ग्रेस पार्टीले नेपालजस्तो देशमा आफ्नो भविष्यको रक्षा कसरी गर्न सक्ला ? वर्तमानको सर्वाधिक पेचिलो प्रश्न खडा भएको छ ।
बीपी कोइरालाको मार्गदर्शनलाई लत्याइसकेपछि पनि काङ्ग्रेस पार्टीले बीपीको नाम प्रयोग गर्न भने छोडेको छैन । बीपी र काङ्ग्रेसको सम्बन्ध अब भावनात्मकभन्दा प्राविधिक छ भन्नु उपयुक्त हुनसक्छ । तथापि संस्थापक नेता भएका कारण बीपी कोइरालामाथि काङ्ग्रेसले आफ्नो स्वामित्व दर्शाउनुलाई पूरै अस्वाभाविकचाहिँ भन्न सकिन्न । सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईबाहेक अरू उच्च तहका कुनै नेताले काङ्ग्रेसबाट बीपीलाई अलग्याएर हेर्ने साहस गरेनन् । संस्थापक नेता भएका कारण मात्रलाई आधार बनाएर काङ्ग्रेस र बीपीको सम्बन्धलाई बुझने हो भने यो सम्बन्ध नितान्त प्राविधिक हो । यसै आधारमा काङ्ग्रेसले बीपीमाथि आफ्नो स्वामित्व दर्शाएको हो भने नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका कारण प्रजातन्त्र र सिङ्गै मुलुकले उहाँमाथिको स्वामित्व दाबी गर्नु अरू बढी उपयुक्त छ । आफ्नो मार्गदर्शक नेताका रूपमा बीपीको नाम उच्चारण गर्ने हैसियतचाहिँ काङ्ग्रेसले गुमाइसकेको छ । विचारविहीन हालतको काङ्ग्रेसले अझै पनि आफ्नो मार्गदर्शक नेताका रूपमा बीपीको नाम उच्चारण गर्छ भने त्यो पाखण्डबाहेक केही हुन सक्दैन, बगरेले बुद्धको नाम लिँदै खसीको गर्धनमा खुँडा चलाएजस्तो मात्र देखिएको छ । काङ्ग्रेसमा मौलिक विचारको बहाली भएका दिन मात्र बीपीमाथिको काङ्ग्रेसको स्वामित्व जायज मानिनेछ ।